Ifulethi Leholide lase-Crystal Cove Beach - I-Airbnb
Ifulethi Leholide lase-Crystal Cove Beach
Itholakala ebhishi lethu eliyimfihlo e-La Mercy, le ndawo ilungele abathandi bebhishi. Iyunithi inikeza umuzwa ongapheli weholide nokufinyelela okulula emgwaqeni omkhulu wokuvakashela i-Umbhlanga noma i-Ballito. Ibanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya endaweni yokudlela ethandwayo i-Seabelle. Vikela isakhiwo esinokufinyelela kwamadoda nokuvikeleka kwamahora angu-24. Ifulethi lethu elinefenisha ephelele lihlanganisa ; i-netflix , i-wifi engaphekiwe, indawo yokubhukuda eyinkimbinkimbi nokubukeka okumangalisayo
Le ndawo - Itholakala e-La Mercy ogwini
- Ukuvikeleka kwamahora angu-24 - Indawo Yokubhukuda Eyakhiwe Ngamapulangwe - Ukufinyelela okuqondile ebhishi
- Ifulethi lesibili - KUFANELE likhwele izitebhisi
- Itholakala endaweni ecezile ngebanga elingu-100M ukuya ebhishi (azikho izivikeli zokuphila emsebenzini)
- Eduze ne-Lavaila lagoon - ethandwa ukudoba nokubhukuda (akukho onogada bokuphila emsebenzini)
- Ukupaka okuphephile -
engaphekiwe - Netflix -
Ilala kalula 2 (1 umbhede omkhulu)
- Ifulethi elinakho konke futhi elivulekile
IKAMELO LOKULALA - LAKHIWE
yekhabethe - Umbhede omkhulu
- Ubhavu oneshawa engaphakathi
- Umcengezi nendlu yangasese
- Ikhishi elinezinto zonke elivulekile elinakho konke ongakudinga
- Itiye, ikhofi noshukela kuyatholakala (sicela ucele izinto ezengeziwe)
- I-Kettle, i-toaster, i-microwave, uhhavini, ifriji/ i-freezer, umshini wokuwasha
nelokudlela - Ukuhlala ngokunethezeka -
i-TV yesikrini se-Flat ne-Netflix
- Itafula legumbi lokudlela elinezihlalo ezinethezekile
akukho UKUBHEMA OKUVUNYELWE
Amahhotela amabili athandwayo/ izindawo zokudlela ziphakathi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo (Viz. I-La Mercy Beach Hotel ne-Seabelle). I-Udloti ikude ngemizuzu engu-7 futhi inikeza izinhlobonhlobo zezindawo zokudlela nezinye izindawo zesevisi, isiteshi se-petrol, amakhemisi, isitolo se-hardware, izitolo ezinkulu ezingu-2, ihhovisi lokuposa, udokotela wezokwelapha nesitolo sotshwala.
I-Umbdloti Beach engumakhelwane iyibhishi lokubhukuda. Ukudoba ngamatshe nokutshuza emagagasini kuyinto ethandwayo, ngakho-ke letha izinduku zakho zokudoba. Indawo yase-La Mercy Beach/ Lagoon inikeza izakhiwo ze-braai, i-lapa, nendawo yokudlala yezingane. I-kite surfing e-lagoon iwumsebenzi othandwayo (kukhona nesikole sokutshuza se-kite).
I-La Mercy iyibanga lemizuzu engu-10 uma uhamba ngemoto ukusuka e-Gateway Shopping Centre; yimizuzu engu-5 uma uhamba ngemoto usuka e-Umhlali nase-Mt. I-Edgecombe Golf Course. I-Durban ne-Shaka Marine World ikude ngemizuzu engu-25 ngemoto.
Sizokwenza kube lula ukungena nokuphuma kwakho. Sivame ukuba nosuku olufanayo lokungena nokuphuma. Isikhathi sethu sokungena singemva kuka-3pm futhi isikhathi sethu sokuphuma singaphambi kuka-10 ekuseni. Kodwa uma udinga ukulahla izikhwama zakho ukuze ungene kusenesikhathi noma ushiye izikhwama zokuphuma sekwephuzile, vele usicele - uma singakwazi ukuzamukela, nakanjani sizozamukela. Sizokuchazela ngeso lenyama ngaphakathi nangaphandle kokubili efulethini kanjalo nesakhiwo. Hlangana nabalindi bezokuphepha abanobungane endaweni yokwamukela izivakashi futhi ubone indlela yokusebenzisa indawo yokubhukuda ne-braai. Phakathi nokuhlala kwakho sihlezi singumyalezo/ ucingo lwe-Airbnb.
Sizokwenza kube lula ukungena nokuphuma kwakho. Sivame ukuba nosuku olufanayo lokungena nokuphuma. Isikhathi sethu sokungena singemva kuka-3pm futhi isikhathi sethu sokuphuma singa…